I-China DOSLY Wireless Controller Iyahambisana ne-PS 4/Pro Console/Slim/PC/Android/IOS 13 ene-Dual Vibration, Touch Pad, Bluetooth, Stereo Headset Jack, Six Axis Motion Control, Ifektri Ewolintshi Eshajwayo kanye nabakhiqizi |Mcldosly
I-DOSLY Wireless Controller Iyahambisana ne-PS 4/Pro Console/Slim/PC/Android/IOS 13 ene-Dual Vibration, Touch Pad, Bluetooth, Stereo Headset Jack, Six Axis Motion Control, Orange Rechargeable
Usayizi: 15 * 10 * 5 CM
Isisindo: 197.3 g
Impilo Yebhethri: Amahora angu-5-8
Isikhathi sokushaja: Amahora angu-2-3
Isikhathi sokulinda: Izinyanga ezi-2
Ibanga lokusebenza: 33ft/10m
1.UKWAKHEKA KWETIMU YE-ALLOWEEN ISILAWULI ESINGAVUMI SESINAMHLANJE: Lesi isilawuli se-ps4 sesitayela se-halloween esimnyama sisekela imidlalo edume kakhulu.Ihambisana nawo wonke amasistimu e-Windows afana ne-Win 7/8/9/10/XP/Vista, njll.
2.UMSINDO Okungenantambo OKUPHEZULU KANYE NOKUTHUTHUKELA KU-1000mAh IMPILO YEBHATHA: I-accelerometer ehlanganisiwe ne-gyroscope inokuzwela okuphezulu, okunethezeka kakhudlwana ukuyibamba isikhathi eside.Okwamanje, isilawuli se-ps4 esingenantambo sidinga kuphela amahora angu-2.5 wesikhathi sokushaja futhi kufika emahoreni angu-10 esikhathi sokudlala.
3.UMZIKO OMHLE WOKUDLULA OKUMANGALISEKILE: Isilawuli se-New Lip Prints Black PS4 sengeza imbobo yomsindo engu-3.5 mm, izipikha ezakhelwe ngaphakathi ezihlala ngaphakathi kwesilawuli, sisetshenziswa ngokuyinhloko njengendlela yokukhulisa ukucwiliswa komdlali ngaphandle kokuphazamisa umndeni wakho noma ohlala naye. .
4.IZIMALI EZINGCONO ZAMAZINKOSHA KANYE NEJOYSTICKS ZINIKELA IDUDUZE NGEMDLALO ESINGAPHEZULU: Ngemva kokuhlolwa okuqinile, izinkinobho nezinduku zenjabulo ze-ps4 zingasetshenziswa izikhathi ezifika esigidini esisodwa.Isilawuli sokudlala esingenantambo se-ps4 siklanywe ngendlela ehlelekile ngezinti zokujabula ezingalingani, ezingadambisa ngempumelelo ukukhathala kwemisipha ekujoyineni kwesithupha sakho.
5.ISIPHO ESIMANGAZISAYO SABANGANI BAKHO NEZINGANE: Isilawuli se-ps4 esingenantambo singaba izipho ezinhle kakhulu zosuku lokuzalwa lomngane nanoma yimuphi umkhosi, njenge-Halloween, i-Thanksgiving, uKhisimusi
I-RIIKUNTEK Isilawuli Esingenantambo se-PS4
Isilawuli esingenantambo samukela ubuchwepheshe bokuxhuma i-Bluetooth, obuhambisanayo okubanzi, ukuxhumana okuzinzile kanye nebanga lokuxhuma elingu-33 FT.Ilungele i-Playstation 4/Pro/Slim, i-PC, i-Android, i-IOS 13, namanye amadivayisi anikwe amandla i-Bluetooth.Ake ujabulele ubumnandi bomdlalo.
Sicela uqaphele: I-RIIKUNTEK Wireless Controller akusona isilawuli esisemthethweni.
I-Graffiti eyisipesheli neyenziwe ngezifiso
Ingaphandle lesilawuli esingenantambo simbozwe ngamaphethini apholile e-graffiti, anemibala kanye nomuntu ngamunye.Kunomehluko othile kuphethini yesilawuli esingenantambo ngasinye.Ngeke siphambanise isilawuli lapho sidlala imidlalo nomngane.Isipho esihle kakhulu somndeni nabangane.
Idizayini ye-ergonomic ikuvumela ukuthi ucindezele izinkinobho zesenzo esibucayi ngokunembile futhi kalula, ukucindezela nje okulula, isilawuli sizophendula ngokushesha igeyimu, sinciphise ubungozi bokusebenza kwamaphutha.
I-360° Joystick & Six-Axis Sensor ikuvumela ukuthi ulawule ngokunembile ukunyakaza komlingiswa wegeyimu, uzwelane nomlingiswa, futhi uzicwilise emhlabeni wegeyimu.
Isilawuli esingenantambo sinamamotho amabili akhelwe ngaphakathi, akunikeza ngamazinga ahlukahlukene emiphumela yokudlidliza ekudubuleni, empini, nasemidlalweni ethusayo, enikeza umoya wegeyimu nokwandisa umuzwa wokushintsha.
Isikrini sokuthinta esizwelayo sinikeza enye indlela yokulawula yabalingisi bomdlalo.Ukulawula isikrini sokuthinta kanye nokulawula induku yokudlala kungashintshwa ngokuthanda kwakho.
Sicela wazi ukuthi imisebenzi ethile yesikrini esithintwayo incike emdlalweni.
Yabelana Ngenhliziyo Yakho
Inkinobho "Yabelana" ingabelana ngerekhodi lakho legeyimu, ukuma kwenhliziyo, ulwazi kusofthiwe yomphakathi, futhi ixhumane nabadlali begeyimu mayelana nobumnandi begeyimu.
I-PS4 Console Connection
1.Isinyathelo 1: Vula ikhonsoli ye-PS4 bese uyixhuma nesilawuli se-PS4(Isimo sokucisha) ngokusebenzisa intambo ye-USB.
2.Isinyathelo sesi-2: Cindezela inkinobho ethi Ikhaya, bese inkomba yebha yokukhanya ye-RGB LED ikhanya.Uma ukuxhumeka kuphumelele, ibha yesibani se-LED izohlala ivuliwe.
3.Isinyathelo sesi-3: Khipha ikhebula le-USB, futhi ungakwazi ukujabulela igeyimu ngesilawuli ngokungenantambo ngobuchwepheshe be-Bluetooth.
Vala: Cindezela inkinobho ethi Ikhaya imizuzwana eyi-10, bese isilawuli sicishiwe.
Xhuma kabusha: Cindezela inkinobho yasekhaya, isilawuli se-PS4 sizoxhuma ngokuzenzakalelayo kukhonsoli ngaphandle kwekhebula le-USB.
1.Isinyathelo 1: Vula i-bluetooth yedivayisi.
2.Isinyathelo sesi-2: Cindezela futhi ubambe inkinobho ethi YABELA NEKHAYA ngesikhathi esisodwa amasekhondi angu-3-5, ukukhanya kwenkomba kuzokhanya ngokushesha.
3.Isinyathelo sesi-3: Khetha "DUALSHOCK 4 Wireless Controller"/"Wireless Controller" ohlwini lwe-Bluetooth.Isibani senkomba sizohlala sikhanyisa ukukhombisa ukuxhumeka okuyimpumelelo.
Sicela uqaphele: I-PC idinga ukufaka umshayeli ukuze isebenzise isilawuli esingenantambo.
Okwedlule: I-DOSLY Wireless Controller Iyahambisana ne-PS 4/Pro Console/Slim/PC/Android/IOS 13 ene-Dual Vibration, Touch Pad, Bluetooth, Stereo Headset Jack, Six Axis Motion Control, Orange Rechargeable
Olandelayo: Isilawuli Esingenantambo se-PS4, Ukumiselela Isilawuli se-PS4 Ngebhethri Eyakhelwe Ngaphakathi engu-1000mAh (Igolide)
I-DOSLY PS4 Isilawuli Esingenantambo Isilawuli Esingenantambo...
Ukushintsha Isilawuli Kusebenza ku-Nintendo...
I-DOSLY Gamepad Controller ye-PS4, i-Wireless PS4 ...
I-PS4 Controller Game Controller ye-PS4 Wireless...
Isilawuli se-V2 Wireless Bluetooth enekhebula le-USB...